Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » 2021 Global Destination Index ikhutshwe
I-Global DMC Partners, inethiwekhi enkulu yehlabathi yeeNkampani ezizimeleyo zoLawulo lweNdawo (i-DMCs) kunye nababoneleli benkonzo yesiganeko esikhethekileyo, iye yatyhila i-2021 Global Destination Index, igxininisa eyona ndibano idumileyo kunye neendawo ezikhuthazayo emhlabeni jikelele kwi-2021, kunye nokuchonga iimarike esele zikho. i-trending ye-2022. Ingxelo yaqulunqwa ngokusekelwe ekuhlalutyeni iimpendulo zesicwangciso esivela kwi-GDP ye-Q3 Meeting & Events Pulse Survey kunye nokuphonononga phantse i-1,600 yeentlanganiso kunye ne-RFPs yokukhuthaza kwiindawo ezingaphezu kwe-500 ezimele i-Global DMC Partners.
Iindawo zokufikela eziphezulu zase-US
2. EFlorida 2. Florida
3. ETexas 3. ETexas
4. Massachusetts (Boston) 4. EHawaii
5. EColorado 5. Nevada (Las Vegas)
Iindawo zokufikela eziphezulu zamazwe ngamazwe
1. Mekhsikho 1. Mekhsikho
2. EUnited Kingdom
(eNgilani naseSkotlani) 2. ElamaTaliyane
3. ESpeyin 3. Fransi
4. EJamani 4. Speyin
5. I-Itali, iDenmark, iFransi (iqhina) 5. IiBahamas
“Nangona kubalulekile kuthi ukuba siyiphonononge le datha minyaka le, kulo nyaka ibaluleke kakhulu. Amaqabane ethu kunye nabathengi kwihlabathi liphela baphuma kwixesha elinzima kakhulu lokuvalwa kobhubhane kwaye bafuna ukwazi ukuba zeziphi iimarike ezingakhuselekanga kuphela kodwa zilungele amaqela ukuze bakwazi ukwenza izigqibo ezinolwazi malunga nocwangciso lwexesha elizayo, ”utshilo uMongameli weGlobal DMC Partners kunye. I-CEO uCatherine Chaulet. “Ngenxa yokuba ishishini lethu linempembelelo enkulu kuqoqosho lwehlabathi ngokuhlanganisa izigidi zabantu kwihlabathi yonke imihla, siziva sinoxanduva lokuphanda, ukuhlalutya kunye nokwabelana ngolu lwazi lubalulekileyo.”
U-Chalet uqhubeke wathi, “Ngokujonga iziphumo zeNtlanganiso ye-Q3 kunye neMisitho yePulse Survey, babonisa ngokucacileyo ukuba ngo-2021, abacwangcisi baseYurophu bahlala njani ngokwengingqi kwiinkqubo zabo. Kwakunjalo nakubathengi base-US ababegcina iintlanganiso ngaphakathi e-US, okanye eMexico naseCaribbean. Nangona kunjalo, xa ujonga imimandla ye-2022 yomdla, kuyacaca ukuba abacwangcisi baqala ukujonga ngaphandle kwemimandla yabo ngeentlanganiso kunye nemisitho. Olu luphawu oluhle lokuba ishishini liqala ukuphinda lizinze, kwaye umhlaba uphinde ufikeleleke ngakumbi. ”
Kubathengi abase-US, yonke imimandla engaphandle kwe-US ifumana ukuthandwa ngo-2022, ngakumbi iYurophu kunye neMexico ezikhokelayo. Kubathengi baseYurophu, yonke imimandla engaphandle kweYurophu ibona ukwanda kokuthandwa, ekhokelwa yi-US kunye neCanada, ilandelwa nguMbindi Mpuma kunye neMexico.